Naturhouse, inkwenkwezi yentengiso yesitokhwe ngoSeptemba | Ezezimali
Ukuba kukho ixabiso elibonisa imeko engenakugwetywa emva kweeholide, ayikho enye ngaphandle kweNathousehouse. Kwenzekile kwiiseshoni ezimbalwa zokurhweba ze Ixabiso elikufutshane nee-euro ezine ngesabelo ngasinye ukoyisa ukunganyamezelwa okubalulekileyo kwi-euro ezintlanu. Ukuziqhelanisa oko kuthetha ukuba ixabise ngaphezulu kwama-25% kwimarike yesizwe eqhubekayo. Ayilolize ukwahluka kwayo konyaka kuba yenye yezona ziphezulu kwimarike yaseSpain, engaphezulu kwama-30%.
Ezi ntshukumo zikhokelela kwinani elandayo labatyali mali abancinci nabaphakathi abathatha inzala kwakhona kwinkampani yesondlo kunye nedetetics. Kuba oku kunyuka kuhamba kunye ne- a ukwanda okukhulu kumthamo wokuthengisa izihloko zabo. Ngaphezulu komndilili, kunye nokuqinisekisa umdla kumgca weshishini omelwe kwezi nkampani zincinci.
Okwangoku akukho zindaba zibaluleke kangaka kwaye zibaluleke ngokukodwa njengokuxhasa ezi iintshukumo ngequbuliso Oko kukuthi kwimarike yezemali yesizwe. Ayothusi into yokuba yenye yeenkampani ezithi bakumaqela abatyali mali abanamava Ngubani owaziyo ngayo yonke intshukumo eyenziweyo kwiimarike zemali. Ngaphandle kwenjongo enye ngaphandle kokuthatha isikhundla kukhuseleko ukuba imeko ifuna njalo.
1 Naturhouse: izibonelelo ezikhulu
3 Amathemba kuluhlu lwakho
4 Ngaba iya kuthengisa kwisalathiso esikhethiweyo?
5 Imeko yangoku yexabiso
6 Inzala enkulu evela kubathengi
Naturhouse: izibonelelo ezikhulu
Iziphumo zamashishini zamva zibonakala ngathi ziyavumelana nale nzala yokuthenga kwinkampani yokutya yesizwe. Ngexesha lesiqingatha sokuqala sonyaka, yafumana inzuzo kwi-13,9 yezigidi zeerandi. Ngokwenza oko ibonisa ukwanda nge-5,3% xa kuthelekiswa nelo xesha linye lonyaka ongaphambili.
Ekugqibeleni, ezi ziziphumo eziqinisekisile abatyali mali. Kuphela kukwisikhundla esikhethekileyo apho kuyaqondakala ukuba inzala yokuthenga ibuyile ngamandla kumgangatho wokurhweba weequities. Nangona ubundlobongela obungaqhelekanga, obwenza ukuba ukholelwe ukuba azizukubakho ezinye iindaba okanye iminyhadala ephawuleka ngokwamaxabiso adweliswe kwizabelo zeNaturhouse.
Kukulo msebenzi kanye apho ufumana imida engcono kwiiakhawunti zakho zeshishini. Batsala umdla wokujikeleza kwabo, kuba nabo inyuse ingeniso yayo ngeli xesha phantse nge-4%. Ngokwahlukileyo kwezinye iinkampani kwimarike yestokhwe yaseSpain ezinengxaki ezithile zokunyusa inzuzo yazo, okanye ezinengxaki yokufumana imali.
Enye yezinto ezigqwesileyo kweli qela loshishino sisibhengezo samva nje malunga nokwabiwa kwezabelo zaso phakathi kwabanini zabelo benkampani. Kuba ngokwenyani, ukusukela kulo nyaka izakusasaza ngeakhawunti, kunye neentlawulo kwiziphumo zonyaka-mali ka-2016, ze Isahlulo se-0,20 yeeros sisonke ngesabelo. Isicwangciso esiya kuthi ngokuqinisekileyo sibakholise abatyali mali bakho, ngakumbi abo bazikhuselayo abafuna le ndlela yempindezelo njengesixhobo sokukhusela imali abayigcinileyo.
Ukusukela ngoku, inkampani yaseRiojan yinxalenye yeklabhu yokhuseleko ekhethiweyo eyenza ukuba le mali isebenze. Njengenye inkuthazo kwabo batyalomali, njengoko unakho kwimeko yakho, abanqwenela ukukhetha esi sicwangciso sotyalo mali. Ngaphandle kwamathandabuzo, isenokuba yenye yezinto ezibangela le meko inyukayo yexabiso kwiimarike eziqhubekayo zaseSpain eziye zachukunyiswa. Ngaphandle kokuba nofifi lokuba lingaya phi ixabiso lakho Kwiinyanga ezimbalwa ezizayo.
Amathemba kuluhlu lwakho
Olunye luthandabuzo olukhulu oluhlasela abatyali mali ngeli xesha, kwaye mhlawumbi nawe, kulapho ixabiso labo linokuya khona. Ngaba izabelo zakho zisaya phezulu? Lisexesha elifanelekileyo lokuba uthathe indawo yokuthenga kwinkampani. Okanye ngokuchaseneyo, ngoku kusemva kwexesha kakhulu ukuvula isithuba kwii-equities ngeli xabiso lemarike yaseSpain.
Ewe, imeko yokuqhubela phambili inokuqhubeka ngexesha leeseshoni ezilandelayo, Ngaphandle kokufika ngexesha kunye nokwamkela ukusikwa kwisilinganiso sakho. Isizathu sokuqinisekisiweyo esisekwe kwidatha elungileyo yobalo eyenziwe kwimihla yakutshanje. Ixhaswe ziziphumo zeendaba ezibalaseleyo ezibonelelwe yile nkampani idwelisiweyo. Konke oku kwixesha elifutshane nelide. Ixesha elide liya kuxhomekeka kwezinye izinto ezahlukeneyo.
Ukuba kuyinyani ukuba indawo elungileyo yenkunzi yenkomo yeNaturhouse ilahlekile. Kodwa ingaqhubeka, nangona kukho iintshukumo ezinobundlobongela obuncinci. Kwaye kunye nokwanda kokungazinzi, okuya kukhuthaza abatyali mali abakhohlakeleyo kwiimarike. Hayi ngelize, baya kuzama ukwenza imisebenzi emifutshane ngexesha labo, nakwiseshoni enye yokuthengisa. Nokuba yeyiphi indlela, icala lobuchwephesha kwisitokhwe lingcono kakhulu kunokuba lalinjalo kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo. Uphumile emgceni kwaye uye ezantsi uye kwinto eyahlukileyo ngokwahlukileyo ilawulwa kukuthenga kwabatyali mali.
Ngaba iya kuthengisa kwisalathiso esikhethiweyo?
Amanye amarhe kwiimarike zezemali zibeka izabelo zayo kurhwebo kwi-Ibex 35, isalathiso esikhethiweyo sentengiso yesizwe. Njengomphumo wokuziphatha kakuhle kwakhe kwiinyanga ezidlulileyo. Kananjalo ngenxa yokunyuka kwevolumu yokuthengisa kwezokhuseleko. Ngapha koko, Kukho ezinye iindlela ezilungiselelwe ngcono ukufezekisa ezi njongo. Ukuba le meko iyenzeka, ngekhe kungathandabuzeki ukuba izabelo zabo ziya kuba nenye into etsala phezulu kwaye inokubathatha baye kwelona liphezulu kule minyaka idlulileyo.
Okwangoku kudwelisiwe kwintengiso ngokubanzi yemarike yaseSpain. Ngakolunye uhlangothi, ukhuseleko oluncinci lweemali ezinkulu olungekabikho kweyona nto ibaluleke kakhulu onokuyiqeshela ukwenza imali oyigcinayo izuze inzuzo. Enye yeengxaki zayo eziphambili abatyali mali abambalwa banendlela ezinzileyo kwizabelo zabo. Ukutsala okunokumthintela ukuba aye kwelona klabhu likhethiweyo kwimarike yestokhwe yaseSpain.
Imeko yangoku yexabiso
Inqanaba lobuchwephesha liphuculwe ngokubonakalayo emva kokufumana kwakhona phantse i-60% ngokubhekisele kubuncinci obubhalisiweyo ekupheleni kukaFebruwari odlulileyo. Ubuyile kwisikhundla phantsi kohlaziyo, ngombono kwixesha eliphakathi elijikeleze i-euro ezingama-7 ngesabelo ngasinye. Ukuba igqithe ngokwaneleyo, iya kuba kwimeko yokugcina ukwanda okungakumbi ngasekupheleni konyaka. Nangona le ntshukumo irhoxisiwe, ubulumko bunokubuyela kwiimarike xa kujongwa ukuma nkqo kokunyuka kokugqibela.
Enye into eya kuthi ichonge ukuvela kwayo kukuba ingaba iziphumo zalo zeshishini ezilandelayo ziyaqhubeka kumgca ofanayo nowokugqibela opapashiweyo. Iya kuba ngumzuzu wokungena okanye ukuphuma ngokuqinisekileyo kwizikhundla zabo. Ngeziqinisekiso ezikhulu zokuba izinto ezilindelweyo zihlangatyezwe ngqongqo ngakumbi. Ukwenza oku, kuya kufuneka ulinde iinyanga ezimbalwa. Kwaye iya kuba sisikhokelo se jonga izikhokelo zakho zenyathelo. Ngayiphi na imeko, iya kuba yenye yexabiso eliza kuthathelwa ingqalelo kulolongezo lulandelayo. Ngaphandle kwenjongo ngaphandle kokwenza iipotifoliyo zotyalo-mali, kunye nezinye izindululo kwizabelo.
Ngayiphi na imeko, esinye sezicwangciso zotyalo-mali esinokusetyenziswa ukusukela ngoku ukuya phambili kukuthatha iipotions ngokungaphelelanga. Ukuba ukunyuka okuphezulu kuyaqhubeka, ukuthengwa kuya kuqokelelwa ukuya kumanqanaba aphezulu kakhulu kunalawa kungoku. Kulabo bangene kwiimarike zezemali kufuneka baqhube inzuzo kude kufike ixabiso lezinye iimpawu zobuthathaka.
Inzala enkulu evela kubathengi
Ukuba kukho nayiphi na into engacingi ngokungathandabuzeki, kukuba abathengi bathathe umkhwa wenkampani. Kwaye okubaluleke ngakumbi, kukonyuka okubonakalayo kumthamo wokuqesha. Ikhule phantsi kweepesenti ephezulu kune-30%, ephawula ukuvela kwamaxabiso ayo. Ngaphezulu kwembono yezinye izabelo, nangaphezulu.
Olunye uphawu oluvela kule nyaniso kukuba baninzi nangakumbi abameli bezemali abajonga ezi zihloko. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba bayabahlalutya ukuze babanike ixabiso ekujoliswe kulo kwaye banokulandelwa ngokuthe gabalala ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi. Inyathelo elinokuthatha isigqibo ekunikezeleni uzinzo kwindaleko kwiimarike zezabelo.
Kananjalo isiphumo esinamandla sokwanda kwayo kumgca weshishini ayinakulityalwa, apho ukuthengisa kwayo kuyanda. Ayothusi into yokuba kufike ingqwalaselo yokuba i-Naturhouse igqithile, kwiinyanga ezintandathu phambi komhla obekiweyo, isicwangciso sokukhula esenzelwe iminyaka ye-2015 kunye ne-2016, sivule amaziko angama-18 ngeenyanga ezili-260, xa kuthelekiswa nama-240 awayecwangcisiwe. ukwazisa kuseto lokuzivocavoca zombini. Ngaphandle kokungena kwayo kwintengiso ebalulekileyo yaseIndiya.
Ngaphandle kwamathandabuzo, ezi ndaba ziye zaba sesinye sezikhuthazo zokuthenga izikhundla eziye zabekwa kubathengisi ngeli xesha. Ngoku umbuzo kuphela ukubuza ukuba kude kangakanani? Iya kuba yiyo emisela ixesha lokuvula izikhundla kweli xabiso lemarike yaseSpain. Kuyenzeka ukuba wophule ukuxhathisa okutsha kunye nokubalulekileyo ngexesha lale nkqubo.
Ukuba unomdla ekungeneni kwakho kwisitokhwe, kuya kufuneka uyazi ukuba ibonisa uguquko olulungileyo ngakumbi kunesisindo esikhulu sobunzima belizwe. Ngaphezulu kwezitokhwe ezinje ngeSantander, BBVA, Iberdrola okanye iTelefonica. Ngaphandle komzuzu kunikezelwe kwiinjongo zalo zokuqhubela phambili. Kodwa endaweni yoko, njengoko ubona kumaxabiso embali. Inokuba lixesha lakho lokungena kwizihloko zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » ishishini » iinkampani » Naturhouse, inkwenkwezi yentengiso yesitokhwe ngoSeptemba